wararka - Jubbalandi Media
Golaha Ammaanka oo u digay Waqooyiga Kuuriya
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa digniin u diray Waqooyiga Kuuriya, kaddib markii maalin ka hor ay tijaabiyeen gantaal kaas oo ay dul mariyeen dalka Japan. Kulan deg deg ah oo Golaha Ammaanka ay yeesheen ayaa waxay si cad uga soo horjeesteen ficilada Waqootiga Kuuriya, iyagoo sheegay in tijaabada gantaalada ay tahay mid khatar ku ah amniga gobolka. Xubnaha Golaha...
Hur iyo Gadiid lagu wareejiyey Ciidamada Xooga Dalka ee ku sugan Jubaland.
Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya oo mudo badan tababar oga soconayey Dugsiga 43aad ee Ciidanka Xooga Dalka ay ku leeyihiin Jubaland waxaa lagu wareejiyey Hub iyo Gadiid ay ku howlgali doonaan hada kadib Ciidamada. Saanadan malatari ee lagu wareejiyey Ciidanka Xooga Dalka waxa ay isugu jireen Gaadiidka Ciidanka noocyadiisa kale duwan oo ay kamid yihiin kuwa aan xabadu karin,...
Madaxweynaha Soomaaliya oo shacabka ku booqday Xeebta Liido ee Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuurada Faderaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho ku tagay Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho oo aheyd xili galab ah dadkuna ay buuxeen. Madaxweynaha ayaa kubad la ciyaaray shacabka ree Muqdisho ee kudamaashadayey Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho, halka qaarna uu Sawiro kugula galay Xeebta. Sidoo kale qaar kamid...
Sargaal sare oo ka tirsanaa Al-shabaab oo isku soo dhiibay Maamulka Magaalada Garbahareey ee Jubaland
Sargaalka horey oga tirsanaa Alshabaab ee isku so dhiibay Dowlada Goboleedka Soomaaliyed ee Jubaland waxa lagu magacaabaa Maxamed Yuusuf Dheel wuxuuna maleeshiyada Alshabaab uu ugu magacownaa Gudoomiyihii Deegaanka Ceel-gaduud ee Gobolka Gedo laamaha amaanka ee Magaalada Garbahaareey ee Gobolka Gedo ayaa warbaahinta u sheegay in ay gacanta ku hayaan Maxamed Yuusuf Dheel...
Gudoomiyaha Aqalka Sare oo Xafiiskiisa ku qaabilay Danjire Micheal Keating
Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arimaha Somalia Danjire Micheal Keating ayaa waxaa uu booqday Xafiiska Gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi waxa ayna kawada hadleen labada dhinac arimaha Dastuurka iyo shaqada ay hayaan Aqalka Sare. kulanka labada dhinac waxaa goob joog ahaa Gudoomiye Kuxigeenka Aqalka Sare xubno Aqalka Sare u qaabilsan arimaha dastuurka...
Madaxweyne Xaaf oo shacabka Galinsoor ugu baaqay iney ka hortagaan Isbaarooyinka.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo booqasho ku tagay Deegaanka Galinsoor waxa uu shacabka kunool Deegaankaa uu kala hadlay dhibaatooyinka ay leeyihiin isbaarooyinka mararka qaar la dhigto jidadka ay isticmaalaan gadiidka. Madaxweynaha Galmudug Mudane Xaaf waxa uu shacabka kunool deegaankaas uu ka codsaday in laamaha amaanka ay kala shaqeeyaan...
Safiir ku xigeenka Jarmalka oo la kulmay Madaxweynaha Jubbaland
Ku xigeenka Safiirka Dowlada Jarmalka ee Soomaaliya Markus Bollmohr oo maanta soo gaaray Magaalada Kismaayo ayaa la kulmay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Kulankan oo ka dhacay Guriga Martida ee Magaalada Kismaayo waxaa lagaga hadlay mashaariicda ay Jarmalku ka fuliyaan Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland iyadoo Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu amaanay Tageerada...
Koonfur Galbeed oo doonaysa in lagu war galiyo Hawlagalada Gobolka
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka codsaday Dowlada Federaalka ah in ay ku war galiso hawlgalada ay ka fulinayaan Ciidamada Shisheeye iyo kuwa Soomaalida. Maxamed Xasan Fiqi ku simaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sheegay in iska warqab la’aanta dhinaca macquumadka ah ay ka dhalan karaan khasaaro shacabka soo gaara. ...
Madaxda Federaalka oo la kulmay Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Barigga Africa
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa maanta la kulmay Danjiraha Midowga Yurub u qaabilsan Barigga Africa, Alexandar Rondos iyo wafdi uu hoggaaminayo, waxayna ka wada hadleen howlaha ay midowga Yurub ka wadaan Soomaaliya iyo sidii loo dar-dargalin lahaa. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa sheegay in uu ku farxsan yahay kulan...
Dahabshiil oo Bangi Caalami ah ka hirgalisay Kismaayo (SAWIRRO)
Munaasabad kooban oo lagu soo bandhigayay waxa uu yahay Adeega D.B.I ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas’uuliyiinta dowlad gobolledka jubbaland,mas’uuliyiin ka soocotay maamulka degmada Kismaayo iyo mas’uuliyiin heer gobol ah, golaha wasiirada xildhibaano, ganacsato iyo dhammaan qeybaha bulshada magaalada Kismaayo. Ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Cismaan Cali Xalane...
Faah faahin: Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Qaraxan oo gaari loo adeegsaday ayaa goor dhow ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama, Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay agagaarka Xaaji Baasto, halkaasoo la sheegayo in la dhigay gaari waxyaabaha qarxa ka buuxay. Goob joogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay ka shakiyeen gaariga ka hor inta uusan qarxin. Ugu yaraan labo ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen...
Golaha Wasiirada oo looga digay isticmaalka Warbaahinta amar la’aan
Ra’iisul Wasaare Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahadi Maxamed Guuleed ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in xubnaha Wasiirada marka ay doonayaan in ay arimo xasaasi ah ka hadlayaaan ay marka hore ogolaansho ka helaan Ra”iisul Wasaare Kheyre. ...
Photo News: Muuqaalka Saldhiga Ciidan ee Turkigu ka dhistay Muqdisho
Akhristayaasha Sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa Sawirradii u danbeeyay ee laga soo qaaday Saldhig Milateri oo Dowlada Turkigu ay ka samaysatay Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya. ...
Dibad Bax lagaga soo horjeedo dadkii lagu laayay Bariire oo Af-gooye ka socda
Agoosto (26 2017) Banaanbax looga soo horjeedo Dadkii Shacabka ahaa ee Shalay lagu dilay Duleedka Degaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa Maanta ka dhacay Degaanka Ceelasha-biya iyo Degmada Afgooye oo ka wada tirsan Gobolka Shabellaha Hoose. Boqolaal Ruux oo isugu jira Carruur iyo Haween ayaa isugu soo baxay Wadooyinka waa-weyne ee Degmada Afgooye iyo Degaanka...
Konfur Galbeed oo digniin adag u dirtay shacabka Garsoorka u raadsada Al-Shabaab
Agoosto (26 2017) Taliyaha Ciidamada Booliska Koofur Galbeed Korneyl Mahad C/raxmaan Aadan iyo Wasiirka Amniga Maamulka Koofur Galbeed Xasan Xuseen oo la hadlay Warbaahinta ayaa ku Amray Shacabka ku nool Degaanada Koofur Galbeed gaar ahaan kuwa ku nool Magaalada Baydhabo in aysan Garsoor u doonan karin Dhulka ay Maamulaan Al-shabaab. Taliyaha Booliska Koofur Galbeed...
Nin Soomaali ah oo Askar ku weeraray dalka Belgium-ka
Agoosto (26 2017) Nin Soomaali ah ayaa la toogtay ka dib markii uu xalay faas ku weerarray askar u dhalatay dalka Belgium, kuwaasoo ku sugnaa caasimadda Brussels. Dacwad oogayaasha dalkaasi ayaa weerarka ku tilmaamay mid argagixiso. Ninka weerarka fuliyay oo da’diisa lagu sheegay 30 jir ayaa markii dambe ku dhintay cisbitaal lagu daweynayay. Mid ka mid ah askarta uu...
Laga soo bilaabo iyo intii uu madaxwayne ka noqday dalka Faransiiska Emmanuel Macron bishii May 2017 ayaa waxa uu qurxinta jirkiisa ku qarash gareeyay lacag dhan 26,000 oo yuuro. Sheekadan ayaa waxa ay noqotay mid ay si aad ah u hadal hayaan dadka isticmaala baraha bulshada. Wargayska todobaadlaha ah ee ka soo baxa Faransiiska ee Le Point ayaa sheegay in lacagtani uu madaxwaynaha...
Taliyaha Ciidamada xoogga oo sheegay in Mas’uuliyiinta Dolwadu ay si qaldan uga hadleen howl galkii Bariire
Madaxda Dowlada Federaalka ah ayaa si aan isfaham ka muuqan uga fal celiyay dhacdadii lagu dilay dad u badan Caruur iyo waayeel oo lagu dilay hawlgal ay ciidamada Soomaalida iyo kuwa Maraykanku ka fuliyeen deegaanka Bariire ee duleedka Degmada Afgooye. Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Jen. Axmed Maxamed Jicmaale (Cirfiid) ayaa sheegay in wararka is khilaafsan ee Madaxda...
Shirkii Hoggaamiyeyaasha Qaaradda Afrika oo lagu soo gaba gabeeyay South Africa (Sawirro)
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay Madaxweynayaal hore, aqoonyahano iyo siyaasiyiin, waxaana shirka ay kaga doodeen qodobo la xariira kaalinta Africa ay ka qaadan karto nabadeynta caalamka intiisa kale iyo sidoo kale dhalinyarada Qaarada Africa in loo diyaariyo mustaqbalka hoggaanka Qaarada waxna ay ka bartaan hogaamiyaashii hore. Hoggaamiyeyaasha waxaa ay aad ugu faaloodeen...
Wasiirka Difaaca “Dadka lagu dilay Bariire wey hubeysnaayeen, hubka inay dhigaan wey diideen”
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa xaqiijiyay in howl galkii ka dhacay meel u dhaw deegaanka Bariire ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka, isagoo xusay in baaritaan uu socdo. Wasiirka oo la hadlayay Idaacada VOA ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka oo howl gal ku jira ay rag hubeysan soo rasaaseeyeen, isagoo xusay in laga codsaday markii...